HESHIIS AY GAAREEN MADAXDA DOWLADDA IYO MAAMUL GOBOLEEDYADA IYO CAALAMKA OO TAAGEERAY - iftineducation.com
iftineducation.com – Ka dib muddo saddex maalmood oo Madaxda Dowladda Somaliya iyo Maamul Goboleedyada uu shir kaga soconaayay Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa gelinkii dambe ee maanta laga gaaray heshiis is afgarad ah.
Iyadoo Madaxweynaha Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud uu safar ugu maqan yahay dalka Kenya, ayaa waxay hadana Madaxda Xukuumadda iyo inta badan Maamul Goboleedyada, ay isla gaareen heshiis ah in in Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya lagu soo xulo hanaanka awood qaybsiga beelaha ee 4.5, halka Aqalka Sare la go’aamiyay in lagu soo xulo 18-ka Gobol.
Shirkan oo ay ka qaybgaleen Wakiilada Beesha Caalamka, ayaa waxay taageereen heshiiska is afgaradka ah, ee ay gaareen Madaxda Xukuumadda iyo inta badan Masuuliyiinta Maamul Goboleedyada.
Suxufiyiinta Magaalada Muqdisho, ayaa soo sheegaaya in inta badan Madaxda Maamul Goboleedyada, ay saxiixeen heshiiskan, marka laga soo taggo Puntland.
Wakiilka Qaramada Midoobe u qaabilsan arrimaha Somaliya, Michael Keating, ayaa waxaa la soo sheegayaa in uu bogaadiyay heshiiska ay qalinka ku duuggeen Madaxda Somalida.
Baarlamaanka hadda jira oo lagu soo xulay nidaamka 4.5, ayaa midka kale ee bedeli doona bisha Augusta, waxaa isna lagu soo xuli doonaa nidaamkaasi.
Taariikhda Maxamed Siyaad Bare